कसरी तपाइँको ब्रान्ड को लागी फन्टहरु लाई छनौट र संयोजन गर्ने क्रिएटिव अनलाइन
जब हामी ग्राफिक पहिचानको डिजाईन बनाइरहेका हुन्छौं, हामीले गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छनौटहरू मध्ये एक हो र कहिलेकाँही हामीलाई लामो समय लाग्छ, फन्टहरू जसले ब्राण्डको प्रतिनिधित्व गर्दछ। una फन्टको राम्रो संयोजन एक मा परिणाम हुनेछ लगातार र ठोस छवि।
ब्रान्डलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कलर प्यालेट धेरै शेडले बनेको हुन्छ। फन्टहरूको साथ पनि त्यस्तै हुन्छ, हामी केवल एक राख्न सक्दैनौं, तर हामीले गर्नुपर्दछ कम्तिमा २ वा choose छनौट गर्नुहोस् जुन सहि रूपमा संयुक्त छन् र ती दृश्यता अपील छन्। हो वास्तवमा, एकचोटि यी स्रोतहरू छनौट गरेमा, हामी उनीहरूसँग टाँस्नु पर्छ र अनियमित रूपमा अरुलाई नथप्नुहोस् किनभने यसले ब्रान्ड मान्यता कम गर्दछ।
यदि हामी २ वाfफन्टहरू मात्र प्रयोग गर्छौं र हामी यसलाई बारम्बार गर्छौं भने, तपाईंको ग्राहकहरु सँधै तपाइँलाई पहिचान गर्न सक्षम हुनेछ। एक ब्रान्ड जुन गर्न सजिलो छ पहिचान गम्भीरता र विश्वास प्रसारण, जो अन्ततः अधिक बिक्री र नयाँ ग्राहकहरु को नेतृत्व गर्नेछ।
यो सिद्धान्त सबै प्रकारका कम्पनीहरू र ब्रान्डहरूमा लागू हुन्छ, जस्तो कि यदि तपाईं स्वतन्त्र डिजाइनर हुनुहुन्छ वा यदि तपाईं इन्टरनेटमा ब्लग चलाउनुहुन्छ भने। तपाईलाई सँधै राम्रो सोच र ठोस ग्राफिक पहिचान चाहिन्छ।
1 फन्टहरू र उनीहरूको प्रयोगहरू कसरी छनौट गर्ने
1.1 शीर्षक वा शीर्षकहरूका लागि फन्ट
1.2 पाठको निकायका लागि फन्ट
1.3 एक्सेन्ट फन्ट
2 फन्टहरू संयोजनको लागि केहि नियमहरू
2.1 दृश्य आदेश र श्रेणीक्रम
2.2 विपक्ष आकर्षित गर्दछ
2.3 धेरै समान फन्टहरू जोड्नुहोस्
फन्टहरू र उनीहरूको प्रयोगहरू कसरी छनौट गर्ने
तपाईका फन्टहरू छनौट गर्न, तपाईले पहिले खोज्नु भएको कुराको एक विचार हुनुपर्दछ। के तपाइँको ब्रान्ड युवा र रमाईलो छ? वा यो बरु सस्तो र सरल छ? हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले केहि लेख्नुहोस् Words शब्दहरू जुन तपाईंको ब्रान्डको व्यक्तित्व वर्णन गर्दछ र ती शब्दहरूको आधारमा तपाईं फन्टहरूको लागि खोजी गर्नुहुनेछ।
तपाईंलाई आवश्यक दुई वाfफन्टहरूमा यो प्रयोग हुनुपर्दछ:
शीर्षक वा शीर्षकहरूका लागि फन्ट
यो तपाईले प्रयोग गर्न लाग्नु भएको फन्ट हो शीर्षक, शीर्षकको लागि वा कुनै पनि पाठ जुन पहिलो स्थानमा ध्यान दिन आवश्यक छ। एउटा छनौट गर्नु उत्तम हुन्छ टाइपोग्राफी पढ्न सजिलो, र त्यो तपाईंको ब्रान्डको व्यक्तित्वमा निर्भर छ बलियो र हडताल।
पाठको निकायका लागि फन्ट
यो टाइपफेस हो जुन तपाईं सबैका लागि प्रयोग गर्नुहुनेछ पाठ निकाय, अनुच्छेद र उपशीर्षकहरू। ध्यानमा राख्दै कि तपाईं यो फन्टमा ठूलो मात्रामा पाठ लेख्नुहुनेछ र यो सानो हुनेछ, यो सम्भव भएसम्म सुवाचक र सरल हुनुपर्दछ ताकि पाठकलाई नेत्रहीन भार नपरोस्। यो छनौट गर्दा, तपाईंले यो ध्यानमा राख्नु पर्छ शीर्षकको फन्टसँग राम्रो मिलान गर्नुहोस्, र केहि हदसम्म तिनीहरू सम्बन्धित हुन सक्छ।
यदि तपाईंले तेस्रो फन्ट प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने, तपाईं एक्सेन्ट फन्ट थप्न सक्नुहुन्छ, जुन फन्टले सेवा गर्दछ निश्चित शब्द वा वाक्यांश उच्चारण गर्नुहोस् वा हाइलाइट गर्नुहोस्। यो अत्यन्त उपयोगी छ विशेष गरी यदि तपाईंलाई दृश्य ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ जुन शीर्षक वा त्यो होईन सामान्य भन्दा बढि आकर्षक हुनुपर्दछ। हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि तपाई बोल्ड फन्ट छनौट गर्नुहोस् जुन अन्य दुई भन्दा फरक छ, उदाहरण को लागी, यदि तपाईंको अघिल्लो दुई फन्ट्स सेन्स सेरिफ छन् भने, तपाईं एक एक्सेंट कर्भ फन्ट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
अब तपाईलाई प्रत्येक फन्टको प्रयोग थाहा छ, तपाईले छान्नु भएको शब्दहरूमा आधारित भएर तपाईले खोजी गर्न सक्नुहुन्छ सन्दर्भ यहाँ केहि उदाहरणहरू छन्:
यदि तपाइँको ब्रान्ड हो क्लासिक, रमणीय र निर्मल, तपाईले सेरिफ टाइपफेस छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, बाक्लो, अग्लो र शीर्षकका लागि हडताल गर्ने, र अर्को पातलो र सरल सेन्स सेरिफ पाठका लागि। एक्सेन्ट टाइपफेस इटालिक फन्ट हुन सक्छ जुन सुन्दर र स्टाइलिश देखिन्छ।
सेरिफ, सन्स सेरिफ र इटालिक फन्टहरूको संयोजन।
यदि तपाइँको ब्रान्ड हो न्यूनतम, आधुनिक र सरल, तपाईं शीर्षकहरूको लागि गोलाकार र फराकिलो सेन्स सेरिफ टाइपफेस, र पातलो र वर्गमान सेन्स सेरिफ टाइपफेस पाठको लागि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। एक्सेंट टाइपफेस अलि बाक्लो इटालिक हुन सक्छ जुन सेन्स सेरिफ सौंदर्यबाट टाढा हुन्छ।
सैन सेरिफ र इटालिक फन्टहरूको संयोजन।
यदि तपाइँको ब्रान्ड हो चल्ती, वर्तमान र रमाईलो, तपाईं मोटा र धेरै हडताल गर्ने सेरिफको साथ टाइपफेस छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, जस्तै सामाजिक नेटवर्कमा फेसनल, र अर्को प्रकाश र पातलो सेरिफको साथ पाठहरूको लागि। एक्सेंट टाइपफेस धेरै बोल्ड र मोटो ईटालिक हुन सक्छ।
सेरिफ र इटालिक फन्टहरूको संयोजन।
फन्टहरू संयोजनको लागि केहि नियमहरू
दृश्य आदेश र श्रेणीक्रम
तपाईंले छनौट गर्नुभएको फन्टहरू निश्चित गर्नुहोस् दृश्य श्रेणीक्रमको साथ अनुपालन गर्नुहोस्, त्यो हो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र हडताल एक अरूबाट छुट्याउन सकिन्छ। यो जान्छ अर्डर स्थापना गर्नुहोस् जुन जानकारी प्रक्रियामा छ। यो पदानुक्रम प्राप्त गर्न, फन्टको छनोट मात्र पर्याप्त छैन तर पनि रंग, फन्ट साइज, बोल्ड, आदि को उचित प्रयोग।
विपक्ष आकर्षित गर्दछ
यो क्लिष्ट फन्टहरू संयोजन गर्दा लागू हुन्छ। यदि तपाईंको शीर्षक टाइपफेस बाक्लो र सेरिफ छ भने, तपाईंको पाठ टाइपफेस पातलो र सेन्स सेरिफ हुन सक्छ। विचार कन्ट्रास्ट उत्पन्न गर्ने हो जुन ध्यान कोर्दछ।
धेरै समान फन्टहरू जोड्नुहोस्
केही हदसम्म, फन्टहरू सम्बन्धित हुन सक्दछन् वा केही समानता हुन सक्छ, यद्यपि दुई फन्टहरू जुन प्रायः उस्तै देखिन्छन् राम्रोसँग काम गर्दैन। यो डिजाइनरको तर्फबाट पनि गल्ती जस्तो देखिन्छ। फन्ट बीचको भिन्नता स्पष्ट छ भन्ने कुरा निश्चित गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ग्राफिक डिजाइन » तपाईंको ब्रान्डको लागि फन्टहरू छान्नुहोस् र जोड्नुहोस्